diabetes drug – Healthy Life Journal
All posts tagged "diabetes drug"
ဆီးချိုသမားကို ဘယ်လိုကိုယ်ချင်းစာမလဲ . . .
—၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. ဆီးချိုရှိသူ အိမ်သားတစ်ဦးကို မိသားစုဝင်တွေက သီးသန့်ထမင်း/ ဟင်းချက်ကျွေးတာ၊ မိသားစုထမင်းဝိုင်းမှာမဟုတ်ဘဲ သီးသန့်စားခိုင်းတာတွေ လုပ်တာရှိကြပါတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ရင်းနဲ့ တချို့ဝေဒနာရှင်တွေက စိတ်အားငယ်၊ စိတ်ဓာတ်ကျသွားတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို...
မိသားစုနှင့် ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါအကြောင်း (Family and Diabetes)
ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ကမ္ဘာပေါ်မှာ ၄၂၅ သန်းသောလူတို့ဟာ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါကို ခံစားနေကြရပါတယ်။ များသောအားဖြင့် သူတို့တွေဟာ အမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါရှိသူတွေဖြစ်ပြီး တကယ်တော့ ကျန်းမာအောင် နေထိုင်စားသောက်မယ်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးနေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင် ဒီရောဂါကို တော်တော်လေးထိရောက်အောင်...
ဆီးချို ဆေးသစ်များ (၂)
ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ဒါကြောင့် ပိန်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အစွမ်းလည်းရှိမယ်၊ သွေးချိုလည်း ချပေးနိုင်တဲ့ဆေး၊ သွေးချိုအကျမလွန်နိုင်ဘဲ ပုံမှန်အထိကျပြီးရင် ထပ်မကျတော့တဲ့ ဆေးသစ်တွေ လိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အပိုဆောင်းပြီး နှလုံးနဲ့ သွေးကြောတွေ မထိခိုက်ဘဲ ပိုကောင်းစေတဲ့ ဆေးမျိုး၊ ကျောက်ကပ်တွေ မပျက်အောင်...
ဆီးချို ဆေးသစ်များ (၁)
ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) အမျိုးအစား(၂) ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါအတွက် နှစ်ပေါင်းများစွာ အသုံးပြုလာခဲ့ပြီး အခုတိုင်လည်း အများဆုံးသုံးနေဆဲဖြစ်တဲ့ မူလဆေးဟောင်းတွေကတော့ မက်ဖော်မင် (Metformin)နဲ့ ဆာလ်ဖော် နိုင်းယူရရီးယား (Sulphonylurea) ဆေးအုပ်စု နှစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အစွမ်းထက်တဲ့ သုံးစရာ ဆီးချိုဆေးတွေရှိနေပေမယ့် ဆေးသစ်တွေဘာလို့ လိုက်ရှာနေရတာလဲ။...